Atariisho U Dhalatay Hindiya Oo Eedeyn Kala Kulantay Farriin Ay Ciidanka Hindiya Ku Taageertay
Tuesday August 13, 2019 - 16:56:52 in News by Hadhwanaag News
Atariisho u dhalatay Hindiya, Priyanka Chopra ayaa lagu dhalleeceeyay in ay dagaal dhiiragelineyso
ka dib markii ay Twitter-ka ku qortay in a taageereyso militariga Hindiya xilli xiisadda Pakistan kala dhexeysay ay cirka isku sii shareereysay.
Haweeney haysata dhalaashada Mareykanka, asal ahaanna ka soo jeeda Pakistan ayaa ku tilmaamtay Chopra "munaafaq", taas oo ka qeybgaliysay shirka quruxda ee Chopra lagu martiqaaday ee ka dhacay Los Angles.
Atariishada ayaa Bishii February qortay: "Jai Hind #IndianArmedForces", Taas oo micneheedu yahay Hindiya Ha Noolaato.
Xilligaas, dalka deriska la ah ee Nukliyerka haysta waxaa Hindiya kala dhexeeyay xiisad si degdeg ah u sii xumaaneysay oo daandaansi militari uu qeyb ka ahaa.
Dhammadkii isbuucii tagay, Chopra oo saaran masraxa Beautycon, oo ah shir bandhig, ayey haweeneyda Amerikaanka ah ee asal ahaan ka soo jeeda Pakistan, Ayesha Malik oo qeyb ka ahayd dhageystayaasha ay su'aal ka weydiisay arrintaas.
"Waxay la mid tahay in ay wax adag tahay in la dhageysto adiga oo ka hadlaya bini-aadamnimo, sababtoo ah, deris ahaan, Pakistani ahaan, waan ogahay in xoogaa munaafaqnimo kaa muuqato," ayey tiri Ayesha Malik, taas oo muuqaalka arrintaas ku daabacday boggeeda Twitter-ka.
Waxay soo qaadatay farriintii Chopra ee bishii February waxayna tiri: "Waxaa tahay safiirka UNICEF ee nabadda, waxaadna dhiiragelineysaa dagaal nukliyer oo ka dhan ah Pakistan. Qofna kuma guuleysanayo taa." ka dib mikrafoonka ayaa laga qaaday Ms Malik si aysan hadalka usii wadin.
Chopra, oo UNICEF u ahayd safiirka wanaagga tan iyo 2016kii, ayaa ku jawaabtay in saaxiibo badan oo reer Pakistan ah ay leedahay, aysanna jecleyn dagaal balse ay ahayd wadaniyad.
Xiriirka u dhexeeya Pakistan iyo Hindiya ayaa gaaray meeshii ugu xumeyd muddo sannado ah, ka dib markii ku dhowaad 40 sakeri oo Hindi ah lagu dilay weerar ka dhacay Kashmiirta ay Hindiya maamusho oo ay sheegteen koox fadhigeedu yahay Pakistan.
Farriinta Twitter-ka ee Chopra waxay ku soo aaday xilli ay Hindiya bilowday duqeyn ay ka fulisay dhulka Pakistan - taas oo sababtay in Pakistan ay weerar celin sameyso.
Chopra waxay ka jawaabtay eedeynta, waxayna weerartay sida ay Ms Malik u hadashay.
"Hadaba, Waxaan leeyahay saaxiibo aad iyo aad u badan oo Pakistan u dhashay, anigana Hindi baan ahay, dagaalna ma ahan wax aan jeclahay, balse wadani baan ahay. Marka waan ka xumahay haddii aan niyad jebiyay dad i jecel iyo kuwo hoprey ii jeclaa, balse waxay ila tahay in dhammaanteen uu naga dhexeeyo heer aan isku fahmi karno, sida adiga hadda aad sameysay," ayey tiri.
"Gabareey, ha buuqin," ayey hadalka ku dartay Chopra. "Dhammaanteen halkan waxaan u joognaa jaceyl. Ha qeylin. Naftaada ha ceebeyn. Dhammaanteen waxaa inaga dhexeeyo is afgarad, laakiin waad ku mahadsantahay xamaasadda, su'aashaada iyo codkarnimada."
Ms Malik waxay dhacdadaas ka dib Twitter-ka ku sheegtay in jawaabta Priyanka Chopra ay tahay "xumeyn" iyo in iyadu ay ka dhigtay "qofka xun".